22:01 - 28 Feb
Guuto Ciidamada QM ee Ugandha ee Soomaaliya oo u dabaaldegay shaqo wanaagooda
Guutada Ciidamada Ugandha ee QM ee Soomaaliya ayaa u dabaaldegay shaqo-hufnaantooda. Ciidamada ayaa la gudoonsiiyay billad-sharaf iyo shahaadooyin xaflad uu ka soo qeyb galay Wakiilka gaarka ah ee Qaramada u qaabilsan Soomaaliya, Michael Keating.
Madaxda Siyaasadda Soomaaliya oo kulmay si ay dib ugu eegaan horumarka habka doorashooyinka soo socda
Madasha Hoggaanka Qaranka (NLF) ayaa laga furay magaalada Baydhabo ee koonfur-gelbeed Soomaaliya si loogu gogol-xaaro hanaanka doorashada ee Agoosto.
Somaaliya oo u dabaaldegaysa maalinta qaxootiga aduunka
Isniintii ayay Soomaaliya u dabbaaldegtay maalinta aduunka ee qaxootiga iyada oo uu dalku sugayo soo noqoshada in ka badan 300,000 ee qaxooti oo ku sugan dalka deriska ah ee Kenya. Dalkan ku yaalla geeska Afrika ee Soomaaliya ayaa ku leh wadamada deriska la ah qaxooti lagu qiyaasay hal milyan.
Ka qaybgalayaasha kulanka Maalinta Caalamiga ee Dabargoynta Galmoodka Khasabka ah ee Goobaha Colaadaha oo lagu qabtay Muqdisho
Soomaaliya oo u dabaal degtay Maalinta ugu horeysay ee Caalamiga ah ee Ciritirka Xadgububyada Jinsiga iyo Colaadda
Maanta Soomaaliya waxay caalamka la wadaagtay inay u dabaaldegto maalinta ugu horeysay ee caalamiga ah ee Tirtiridda ee Xadgububyada Jinsiga iyo Colaadda, iyadoo dadweynaha laga codsaday in ay ka hadlaan denbigan.